२७ चैत - पीरो खुर्सानी खाए के होला? पोल्छ, पीडा हुन्छ, धेरै भए मुखमा बलिरहेको कोइला हालेजस्तो महसुस हुन्छ, त्यसभन्दा बढी भए तपाईं रुनुहुन्छ, उल्टी गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ, मैले जीन्दगीमा के बिराएको थिएँ?
चिनियाँ सपिङ मलमा भाडामा ‘ब्वाइफ्रेण्ड’ सेवा सुरु
२४ चैत - चिनियाँ सपिङ मलहरुमा ‘ब्वाइफ्रेन्ड सेयरिङ’ सेवा सुरु गरिएको छ। तर भ्रममा नपर्नु होला ती ब्वाइफ्रेन्डले सपिङ मलभित्र तपाईंको झोला मात्रै बोकिदिनेछन् र आवश्यक परे सरसामान किन्नमा सल्लाह दिनेछन्।
२४ वर्षपछि यसरी भेट्टाए बाबुले हराएकी छोरी
२१ चैत - चीनमा एक व्यक्तिले आफ्नी छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पारेका छन्। चार वर्षकी छोरी हराएका ती बाबुले अन्ततः दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी छोरी फेला पारेका हुन्।
जापानी समुद्रमा हराएको क्यामरा दुई वर्षपछि ताइवानी किनारामा भेटियो
१५ चैत - समुद्रमा खसेर हराएको क्यामरा दुई वर्षपछि जस्ताको तस्तै फेला पर्‍यो भन्दा तपाईं पत्याउनुहुन्छ? तर ताइवानमा यस्तै एक अनौठो घटना भएकाे छ।
ओभरटाइम काम गर्न नदिन कोरियामा कम्प्युटर बन्द गरिने
९ चैत - दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलमा कर्मचारीहरुलाई समयभन्दा बढी काम गर्नबाट रोक्न सरकारले सम्पूर्ण कम्युटरहरु शुक्रबार साँझ समयमै बन्द गर्ने एक कार्यक्रम अघि सारेको छ।
३ चैत - अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला दिँदा प्रमाणलाई मुख्य प्राथमिकता दिन्छ। तर रोमानियाको एक अदालतले प्रमाणका रुपमा जिउँदो मानिस आफैँ इजलासमा उपस्थित हुँदाहुँदै ती व्यक्तिको मृत्युलाई सदर गरेको छ।
२५ फागुन - सेल्फी खिच्नु अब किशोरकिशोरीको रहरको विषय मात्र रहेन। हालै अन्टार्कटिकामा खिचिएको एक जोडी पेन्गुइनको सेल्फी भाइरल बनेको छ।
२१ फागुन - रुसकी एक सिनेटर आफ्नो केशविन्यासका कारण चर्चामा आएकी छन्। ६२ वर्षीया भ्लोन्टिना पेत्रेन्को रुसको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य हुन् र केही समययता आफ्नो कपालका कारण विश्वभर चर्चामा छाइरहेकी छिन्।
१९ फागुन - पाकिस्तानको एक टेलिभिजन च्यानलका दुई समाचार प्रस्तोता छोटो ब्रेकका बेला आपसमै बाझिरहेको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ। फेब्रअरी २४ का दिन सो घटना भएको हो।
१६ लाख डलरमा बिक्यो ‘अफ्रिकी मोनालिसा’
१७ फागुन - दशकौँसम्म हराएपछि फेला पारिएको बेन एनवनुको एक चर्चित चित्र १६ लाख डलरमा लण्डनमा लिलाम भएको छ। ‘अफ्रिकी मोनालिसा’ का रुपमा चर्चित एनवनुको ‘तुतु’ नामक सो चित्र १९७४ मा बनाइएलगत्तै हराएको थियो।
बालीमा ‘आँखा’ नलागोस् भनेर भारतीय किसानले खेतमा लगाए सन्नी लियोनको पोस्टर
३ फागुन - भारतको आन्ध्रप्रदेश राज्यमा एक किसानले आफ्नो बालीमा ‘आँखा’ नलागोस् भनेर सन्नी लियोनको पोस्टर खेतमा टाँगेका छन्। उनले आफ्नो यो तरिकाले काम गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन्।
स्टालिनको विषयमा रेडियोमा बहस गर्दागर्दै दुई पत्रकारबीच कुटाकुट (भिडियो)
१७ माघ - रुसमा स्टालिनको विषयमा रेडियोमा प्रत्यक्ष बहस गरिरहेका दुई पत्रकारबीच कुटाकुट भएको छ। मंगलबार मस्कोस्थित कोम्सोमोल्स्काया प्राव्दा नेटवर्कमा बहस गर्दागर्दै दुई पत्रकार भिडेका हुन्।
१५ माघ - संसारकै सबैभन्दा अग्ला पुरुष र सबैभन्दा होची महिला इजिप्टमा एक फोटोसुटका लागि भेट भएका छन्।
१ माघ - अओइले ११ अप्रिल २०१० मा ट्विटर खोलिन्। यो विषयमा ट्विटर प्रतिबन्धित रहेको चीनमा समाचार फैलियो। त्यसैकारण उनका अनेकौँ फ्यानले चीनको ‘ग्रेट फायरवाल’ पार गरेर भिपिएनमार्फत ट्विटर अकाउन्ट खोलेर उनलाई फलो गरे। त्यो रातलाई पछि ‘सोरा अओइको रात’ नामाकरण...
२५ पुस - हेर्दा उनीहरु पनि वास्तविक नग्न नर्तकझैँ लाग्छन्, जो पोल वरिपरि घुमीघुमी नाचिरहेका छन्। तर ती नर्तक मानिस होइनन्, रोबोट हुन्। यसै साता अमेरिकाको लस भेगासस्थित कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स शोबाट निस्किँदै गरेका दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउन रोबोटहरुले ‘पोल...
१८ पुस - सार्वजनिक स्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध लागेपछि न्युजिल्याण्डमा मदिराप्रेमीले समुद्रमा बालुवाको टापु बनाएका छन्। कोरोमान्डल प्रायद्वीपको टाइरुवामा मदिराप्रेमीहरुको एक समूहले आइतबार अर्थात् नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सो टापु निर्माण गरेका...
६ पुस - पहिलो विश्वयुद्धको क्रममा बेपत्ता पहिलो अष्ट्रेलियाको पहिलो पण्डुब्बी जहाज १०३ वर्षपछि अहिले फेला परेको छ। शताब्दी लामो खोजपछि पहिलो विश्वयुद्धको ठूलो र अष्ट्रेलियाकै सबैभन्दा ठूलो रहस्य मानिएको यो खोजी टुंगिएको हो।
१८ मंसिर - इन्द्रेणी हेर्न मन नपराउने को होला? प्रायःजसो यो क्षणिक हुन्छ, धीत मर्न नपाइ हराइहाल्छ। तर चाइनिज कल्चर युनिभर्सिटी ताइपेइका प्राध्यापक र विद्यार्थीले भने गत साता ९ घण्टाका लागि इन्द्रेणी हेर्ने मौका पाएका छन्।
१६ मंसिर - उनले हवाइ परिचारिकाको काम राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर हुँदा सुरु गरेकी थिइन्। अहिले यो पेसा अपनाएको ६० वर्ष पूरा भएको छ र उनी ८१ वर्ष पुगेकी छन्। अझै सेवानिवृत्त हुने उनको कुनै योजना छैन।
१२ मंसिर - भारतको उत्तर प्रदेशस्थित जलावन जिल्लामा बिरुवा खाइदिएको अभियोगमा ८ ओटा गधालाई ४ दिनसम्म जेलमा थुनिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको स्वच्छ भारत अभियानका क्रममा ती बिरुवा रोपिएका थिए।
७ मंसिर - फ्रान्सेली राजधानी पेरिसमा नग्न व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाउने रेष्टुरेन्ट पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको छ। यो रेष्टुरेन्टमा प्रवेश गर्नुअघि ग्राहकले ढोकामै सम्पूर्ण कपडा खोल्नुपर्छ।
२२ कार्तिक - क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एक अध्ययनमा भेडाले मानिसको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने देखिएको छ।
८ कार्तिक - ‘लामो खोजी र निरन्तरको बैचनीपछि प्राप्त हुने सफलताले भन्दा एक शान्त र विनयशील जीवनले धेरै खुसी दिन्छ,’ आइन्स्टाइनको नोटमा लेखिएको थियो।
७ कार्तिक - कार्बन उत्सर्जन कम गर्न भन्दै चीनको हान्जाओका जोडीहरूले ग्रुप विवाह आयोजना गरेका छन्। परम्परागत भोज र तामझामबाट बाहिर निस्केर पूर्वी चीनको झेझेङ प्रान्तको हान्जाओका २० जोडीले आइतबार अर्थपूर्ण रुपमा सामुहिक विवाह गरेका हुन्।
६ कार्तिक - फ्रान्सको ‘फर्स्ट डग’ ले राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको एउटा बैठक बिथोलिदिएको छ। त्यो पनि एलिजी दरबारको अगेनोमा मुत्र बिसर्जन गरिदिएर। राष्ट्रपति कार्यालयको सजावटी अगेनोमा म्याक्रोनको पाल्तु कुकुर नेमोले पिसाब गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि...
२ कार्तिक - जकार्ता इण्डोनेसियाकी पुष्पा देवीले केही दिनअघि आफ्नो ५०औं जन्मदिन मनाइन, जो आफ्नो उमेरभन्दा झण्डै दुई दशक नै तरुनी देखिन्छिन्।
१९ असोज - इण्डोनेसियामा एक भीमकाय अजिंगरलाई स्थानीयले मारेर खाएका छन्। एक स्थानीय सुरक्षा गार्डको हातमा टोकेपछि झण्डै २६ फिट लामो अजिंगरलाई मारेर खाइएको एक प्रहरीलाई उधृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ।
११ असोज - भनिन्छ, कुनै पनि परिकथा पूरा हुन एक राजकुमार र एक राजकुमारीको आवश्यकता पर्छ। विवाहका लागि मात्रै पनि जोडा चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ। तर यी सबै मान्यताहरुलाई उल्ट्याउँदै इटालीकी एक महिलाले आफैँसँग विवाह गरेकी छन्।
१० असोज - भारतमा ९७ वर्ष पुगेका एक व्यक्तिले एमए पास गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको बरेलीका राजकुमार वैश्यले सोमबार अर्थशास्त्र विषयमा एमए पास गरेका हुन्।
६ असोज - पुस्तकालयबाट लिइएका थुप्रै पुस्तक फिर्ता हुँदैनन्। अझ ८० वर्ष अघि लिइएको कुनै पुस्तक फिर्ता होला भन्ने त सायदै कसैले सोच्ला। तर अमेरिकाको मासाचुसेट्सस्थित एक सार्वजनिक पुस्तकालयमा ८० वर्षअघि लिइएको पुस्तक फिर्ता भएको छ।